Ukufakwa kuka-Apple kuya kunyamalala ngoSeptemba ngeMojave | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-Apple's Aperture photo editor iya kufa
Ukuba nangasiphi na isizathu ungumsebenzisi we Isixhobo se-Apple sokuvula kwakhona ifotoKungcono uye ucinge ngokufudusa yonke imifanekiso onayo kwithala leencwadi, kuba ubomi bakho buza kuba ngcono.
Isizathu soku kufuneka kwiinguqulelo ezilandelayo ze-macOS ukuba abayi kuba nesi sixhobo sokuphinda bathathe imifanekiso kwi-Apple brand eyaziwayo, enezigidi zabalandeli kuwo wonke umhlaba.
Okubi kunakho konke, siyayazi le nuncio ngo iphepha lenkxaso le-Apple kwaye oko kubonwe yiMacRumors. Kuya kufuneka uyazi ukuba sijamelene nesixhobo esingakhange siphuhliswe ukusukela ngo-2014, eyiminyaka emihlanu. Ixesha eliphakamileyo kakhulu ngaphandle kwento entsha.
Ke ayisothusi into yokuba uApple enze isigqibo sokuyisusa kwiinguqulelo ezizayo zeMacOS ezilandela iMojave. Ukuba sidibanisa kuleUkusetyenziswa ngokulula kweefoto zeApple, inokuqondakala ukuba nabasebenzisi bayibeke ecaleni ngaphambi kokusebenziseka kwayo.
Iyakuba yinyanga kaSeptemba xa ukukhutshwa kweMojave kuqala, eya kuthi ikhokelele ekunyamalaleni kweMbobo, ngenxa yoko unexesha lokufudusa lonke ithala leencwadi onalo kule app yeApple. Kusuka kwiphepha elifanayo lenkxaso apho sinokufumana khona imiyalelo yokufudukela kwiapp yeApple okanye kwiAdobe Lightroom Classic uqobo.
Njengesiqhelo ungafikelela kwezinye iindlela njani ukuba yi-Affinity Photo, apho ubuncinci be-euro, malunga nento ebuyisayo, ingaba yinkqubo ilungele ukutshintsha indawo ka-Apple. Enye yeendaba apho ukuba asiqwalaseli singaphulukana nemifanekiso ebesinayo eApertura.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » I-Apple's Aperture photo editor iya kufa
Yila ikhava yencwadi yokuthengisa
Funda indlela yokusebenzisa isixhobo seFotohop's 3D